Cinwaanka IP-ga 192.168.8.1 waxaa loo adeegsadaa isku-xirka shabakadaha shaqsiyadeed ee nidaamyo kala duwan leh. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa marka la bilaabayo nidaamka galitaanka si loo muujiyo qalabka shabakadda. Si aad u hesho 192.168.8.1 dhig Ip-ka cinwaanka barta cinwaanka shabakaddaada, ama dhagsii xiriirka hoose.
192.168.8.1 Maamulka Galitaanka
In kasta oo ay tahay shabakad shaqsiyadeed, waxay ka dhigan tahay in horay loo wada yeelan karo isla mar ahaantaana nidaam taxane ah ee shabakado kala duwan. PC-yada aan lahayn xiriir shabakad waa inay ku habboon yihiin mid kasta iyo internet kasta oo TCP ama maamuus IP ah.
Soo galitaanka 192.168.8.1
Sidee loo Geliyaa 192.168.8.1?
Cinwaanka IP-ga ayaa muhiim u ah markaad rabto inaad gasho router-kaaga. Tallaabada ugu horreysa waa in la helo qaar ka mid ah daalacashada internetka & geliyaan ah https://192.168.8.1 xiriiri sanduuqa URL-ka biraawsarka oo hadda riix 'Ku qor furaha.
Daaqad cusub ayaa furan taas oo kugu boorinaysa inaad gasho aqoonsiyada. Waxaad markaa u adeegsan doontaa dibloomada galitaanka caadiga ah si aad ugu soo gasho interface router.
Ka dib markii habka galitaanka uu kobcayo, waxaa lagu geyn doonaa bogga hore ee router-ka. Guddiga maamulka, waxaad wax ka beddeli kartaa dhowr dejin oo u dhigma shabakaddaada & dookhyada amniga.
Wax ka beddelka cinwaankaaga router IP-ka laguma talinayo had iyo jeer haddii uu sameeyo xirfadle aqoon leh.
IPM Username iyo Cinwaanka Furaha?
Haddii aad ilowdo 192.168.8.1 Username iyo Password markaa waad ka raadin kartaa Buugga / Sanduuqa Router-ka. Waxaad ka raadin kartaa liistadayada router-ka ee adeegsadaha caadiga ah iyo ereyada sirta ah.
Dib u dejinta routerka
Haddii aad bedeshay magaca isticmaalaha / lambarka sirta ah oo aad ilowday, sida kaliya ee dib loogu soo celin karo marin u heliddu waa in dib loo habeeyo router-ka qaab-dhismeedka caadiga ah, kaas oo ku soo celin doona dhammaan isbeddelada goobaha caadiga ah. Si dib loogu dhigo router-kaaga:
Qaado shay dhibic leh, sida irbad ama warqad xaashi ah, oo raadi badhanka dib udajinta ee dhabarka routerkaaga.
Waxaad heli doontaa badhanka sirta yar. Guji oo ku dheji batoonka sheyga dhibcaha leh illaa 10-15 ilbidhiqsi.
Tani waxay soo celin doontaa dhammaan isbeddellada lagu sameeyay kuwii hore, oo ay ku jiraan magaca isticmaalaha / lambarka sirta ah ee aad beddeshay. Waxaad markaa gali kartaa adiga oo adeegsanaya aqoonsigaaga soo galida caadiga ah.
Waa wax caadi ah marxaladda qaar inaad la kulanto dhibaatooyin kala duwan router-kaaga. Haddii aadan ka gudbi karin shaashadda galitaanka, waxaad u baahan tahay inaad xusuusato waxyaabaha qaarkood. Xaqiiji in internetka uu wali xasilloon yahay oo uusan isbeddelin. Ikhtiyaar kale ayaa ah in la isticmaalo Amarka degdegga ah si loo go'aamiyo albaabka laga baxo. Cinwaanka IP-ga ee khaldan ee aad u adeegsan karto si aad uga dhex gasho adeegsadaha isticmaalaha. Waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa bixiyaha adeegga internetka wixii caawimaad dheeraad ah.
'192.168.8.1'waa cinwaan IP ah oo qarsoodi ah. Kani waa cinwaanka IP-ga ee caanka ah tusaale ahaan '192.168.0.1' & '198.168.0.1' maadaama ay leedahay waxqabad la mid ah tan soo hartay 2 wali waxa kaliya ee lagu kala soocayaa waa '192.168.8.1' looma isticmaalo a ugu badnaan shirkadaha router. Shirkadaha sida MediaLink, Huawei waxay adeegsadaan cinwaankan Protocol-ka saafiga ah.
Waa inaad ogaataa in dhammaan router-yada ay ku jiraan 2 nooc oo cinwaanno IP ah oo kala duwan. Cinwaan IP ah oo laga helay shabakadda maxalliga ah ee loo yaqaanno LAN IP address & inta soo hartay waxaa loo qoondeeyay modemka loo yaqaan 'WAN IP address'. Cinwaanka IP-ga '192.168.8.1' waxaa badanaa loo isticmaalaa si loo helo shaqeynta router-ka. Cinwaankan IP-ga ah ee shakhsiga ah waxaa loo isticmaalaa qaabeynta qalabka shabakadda.
Markii hore sida loo helo cinwaanka IP ee router.
Marka hore, ku xir routerkaaga kombuyuutarka ama qalab kasta oo kale si sax ah. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato in si aad u furto guddiga maamulka router waxaad u baahan tahay inaad ku xirto router si habboon. Adiguna uma baahnid nooc internet ah tan.
Marka, waxaad u baahan tahay in lagula qabsado cinwaanka IP ee router-kaaga. Waad garan kartaa cinwaanka IP-ga ee router-kaaga adoo booqanaya amarka degdegga ah ee Laptop-ka.
Hab kala duwan oo lagu soo booqdo 192.168.8.1 IP Address
Xitaa waad badali kartaa cinwaanka IP-ga router-ka waqti kasta habab 2 ha ahaato adoo furaya meel kale oo CD gaar ah adigoo adeegsanaya websaydh. Waxay muhiim u tahay inteena badan maadaama macaamiil badani ay rabaan inay hubiyaan inaysan jirin wax cinwaan ah 192.168.8.l oo cinwaankooda qalab kale la qabsado. Haddii qof iloobo cinwaankiisii ​​ugu dambeeyay ee IP, markaa asaga ama iyadu waxay dib u dejin karaan router-ka ka dibna wax walba dib ayaa loogu celin doonaa cilado. Intaa waxaa dheer, qof kastaa wuu raadin karaa cinwaankiisa IP-ga ah ee la wadaago isagoo raadinaya "IP-kayga" meesha raadinta Google. Xaqiiqdii, waxay dib ugu laaban doontaa cinwaankaaga IP-ga ee la wadaago.
Waqtigan xaadirka ah u tag biraawsarkaaga asalka ah ama biraawsar ka duwan ka dibna gal cinwaanka bar IP https://192.168.8.1 galay cinwaanka cinwaanka biraawsarka. Tani waxay kugu hagi doontaa goob gaar ah & waxay kuu sahlaysaa inaad gasho si aad u gasho guddiga maamulka router.
Halkan, waxaad u baahan tahay inaad ku qorto magaca isticmaalaha iyo erayga sirta ah ee router-kaaga si aad u gasho guddiga maamulka router-kaaga kaas oo aad wax ka beddeli karto xulashooyin badan sida Wakiilka, xulashooyinka amniga, maareynta shabakadda, goobaha WLAN, softiweerka routerka & wax badan oo dheeri ah.
Haddii aadan dib u xasuusan magaca 'Username & Password Router' maxaa la sameeyaa?
Shaqsiyaad dhowr ah ayaa laga yaabaa in aysan dib u soo ceshan magacooda adeegsigooda & isgaradkooda. Sidaa darteed waxaa jira sharaxaad ku saabsan kuwa iyagu liqay magaca isticmaale & lambarka sirta ah.
Waxaa laga yaabaa inay dhacdo kiis ah inaadan dib u xasuusanin magacyada isticmaaleyaasha & dameeraha. Xaaladda noocaas ah, waa inaad ugaarsataa astaanta router-ka oo ay weheliso lambarka taxanaha router & cinwaanka galitaanka.
Hal kiis oo kale ayaa laga yaabaa inaad ku guul darreysatay inaad dib u soo celiso baaskiilkaaga. Marka, waxaad u baahan tahay inaad dib u dejiso goobaha router-ka oo leh furaha dib-u-dejinta qarsoodiga ah ee router-ka.
Kiis kale waxay u egtahay inaadan waligaa wax ka beddelin aqoonsiga gelitaanka router-kaaga taas oo ah inaad adigu raadin karto Soo galitaanka saxda ah ee router Aqoonsiyada shabaqa
Hada hadaad miyir qabtid faahfaahinta soo galitaanka router-ka, waxaad ku qori kartaa ID-yada router-kaaga bogga websaydhka & markaa waxaad heli kartaa guddiga maamulka router.
Xitaa waxaad dib ugu cusbooneysiin kartaa router-ka websaydhka aasaaska webka.
Dhamaadka, waxaad cayimay dhowr qodob oo ku saabsan 192.168.8.1 Cinwaanka Borotokoolka Internetka. Waxaa jira macluumaad badan oo ku saabsan router-yada, modem-yada wireless-ka ah, cinwaanada IP-ga, iyo waxyaabo badan oo dheeraad ah oo lagu soo bandhigay qaybtaan. Cinwaankan IP-ga ah ayaa kaa caawin doona inaad habayn ku sameysid khadka qadka tooska ah ee guriga dhexdiisa adigoon arrimo badan hor imaan Waxaan rajeyneynaa inay tani waxtar kuu laheyd dhammaantiin inaad marin u heshaan shabakadda router-kaaga oo runtii waxay kordhisay macluumaadkaaga cinwaanka IP-ga.
Maxaa Da'daydu Hadda